DEBIAN 10 တွင်ဆော့ (ဖ်) ဝဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ Linux မှ
ဒီ post ကဆက်ပြောသည် (တတိယအပိုင်း၏ လဲ tutorial ဆက်ကပ်အပ်နှံ DEBIAN GNU / Linux Distro, ဗားရှင်း ၁၀ (Buster)ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်များစွာသောအခြားသူများအတွက်အခြေခံအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သော MX-Linux 19 (Ugly Duckling).
ဒီတတိယအပိုင်းမှာငါတို့ပြမယ် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော packages များ (applications များ) လိုအပ်သောပေးရန်အကြံပြုခဲ့သည် ထောက်ပံ့ အခြေခံ အတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်ကွပ်မျက် အချို့ ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) များ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှပကြီးမြတ် Distros အကြောင်းကို DEBIAN 10 နှင့် MX-Linux 19.
ဤစီးရီးရှိယခင်ပို့စ် ၂ ခုမှာ -
ထည့်သွင်းပြီးနောက် MX-Linux 19.0 နှင့် DEBIAN 10.2 ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပါ (entry ကိုကြည့်ပါ)
DEBIAN 10: တပ်ဆင်ပြီးနောက်အပိုထပ်ဆောင်းအစီအစဉ်များသည်ဘာလဲ။ (entry ကိုကြည့်ပါ)
"ဤနေရာတွင် run ရန်နှင့် install လုပ်ရန်ဤနေရာတွင်အကြံပြုထားသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် package များသာဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။ "packages များ အကြံပြုခဲ့သည်" ၎င်းတို့အားလုံး (သို့) အချို့ကိုတပ်ဆင်ရန်နှင့်တစ်ခုချင်းစီအပေါ် မူတည်၍ ၎င်းတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သနည်း ရေတိုသို့မဟုတ်အလယ်အလတ်ကာလအတွက်၎င်းတို့ကိုသိရှိပြီးအသုံးပြုရန်လိုအပ်သောသို့မဟုတ်အသုံးဝင်သော, သူတို့ကိုပြီးသား run သို့မဟုတ် installed ရှိခြင်းအားဖြင့်။
ထိုလုပ်ရပ်များနှင့် / သို့မဟုတ် packages များဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ ယခင်က Distros နှစ်ခုလုံးအပေါ်စမ်းသပ်ပြီးနှင့်၎င်းတွင်ပုံမှန်ထည့်သွင်းထားသော package များကို uninstall လုပ်ရန်မတောင်းဆိုပါနှင့်။ ထို့အပြင် သူတို့ကမှတ်ဉာဏ်သို့မဟုတ် CPU ကို၏စားသုံးမှုတိုးမြှင့်ကြပါဘူး သူတို့ကပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့ကလုပ်ငန်းစဉ်များသို့မဟုတ် daemons (၀ န်ဆောင်မှုများ) ကိုပုံမှန်အားဖြင့် load မပေးပါဘူး။ အထုပ်တစ်ခုစီအတွက်မည်သည့်အတွက်အသုံးပြုသည်ကိုကြိုတင်သိလိုလျှင်နှိပ်ပါ ဒီမှာ."
1 Software Development အထောက်အပံ့အတွက်အထုပ်များ
1.1 Java application များအတွက်အထောက်အပံ့
1.2 QT5 application များအတွက်အထောက်အပံ့
1.4 Web application support
1.4.1 Apache ကို
1.4.4 က MySQL
1.4.6 PHP ကို
1.4.8 Python ကို
Software Development အထောက်အပံ့အတွက်အထုပ်များ
Java application များအတွက်အထောက်အပံ့
ရည်မှန်းချက်: Java applications များနှင့်လိုက်ဖက်ခြင်းအတွက်အခြေခံအထောက်အပံ့ကိုထည့်သွင်းပါ။
QT5 application များအတွက်အထောက်အပံ့
ရည်မှန်းချက်: QT5 ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော application များနှင့်လိုက်ဖက်ညီစေရန်အခြေခံအထောက်အပံ့ကိုထည့်သွင်းပါ။
ရည်မှန်းချက်: ဒစ်ဂျစ်တယ်သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းသုံးကိရိယာများတပ်ဆင်ရန်နှင့်စီမံခန့်ခွဲရန်အတွက်လိုအပ်သောအပလီကေးရှင်းများ၊ ယာဉ်မောင်းများနှင့်စာကြည့်တိုက်များ၏အခြေခံအထောက်အပံ့ကိုထည့်သွင်းပါ။
ရည်မှန်းချက်: ယနေ့ခေတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းသုံးကိရိယာများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စုစည်း၍ / သို့မဟုတ်အသုံးပြုရန်အတွက်အသုံးပြုသော Berkeley v5.3 database library ကိုအသုံးပြုသောပရိုဂရမ်များအတွက်အခြေခံစာကြည့်တိုက်အထောက်အပံ့ကိုထည့်သွင်းပါ။
ရည်မှန်းချက်: Apache2 အတွက်အကောင်းဆုံးသို့မဟုတ်လိုက်ဖက်တဲ့ web application များအတွက်အခြေခံအထောက်အပံ့ကို install လုပ်ပါ။
ရည်မှန်းချက်: Nginx အတွက်အသင့်တော်ဆုံးသို့မဟုတ်လိုက်ဖက်တဲ့ web application များအတွက်အခြေခံအထောက်အပံ့ကိုထည့်သွင်းပါ။
ရည်မှန်းချက်: Postgresql-based Databases များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အခြေခံ command နှင့် function support ကို install လုပ်ပါ။
ရည်မှန်းချက်: Postgresql အခြေပြုဒေတာဘေ့စ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အခြေခံလျှောက်လွှာပံ့ပိုးမှုထည့်ပါ။
ရည်မှန်းချက်: MySQL-based databases ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အခြေခံ command နှင့် function support ကို install လုပ်ပါ။
ရည်မှန်းချက်: MySQL အခြေခံဒေတာဘေ့စ်များ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အခြေခံလျှောက်လွှာပံ့ပိုးမှုထည့်ပါ။
ရည်မှန်းချက်: MariaDB ကို အခြေခံ၍ Databases များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အခြေခံ command နှင့် function support ကို install လုပ်ပါ။
ရည်မှန်းချက်: PHP-based applications များကိုင်တွယ်များအတွက်အခြေခံ command ကိုနှင့် function ကိုထောက်ခံမှု install လုပ်ပါ။
ရည်မှန်းချက်: PHP-based applications များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အတွက်မူလစာကြည့်တိုက်များ၏အခြေခံအထောက်အပံ့ကိုထည့်သွင်းပါ။
ရည်မှန်းချက်: PHP-based applications များကိုင်တွယ်ရန်အခြေခံ non-native စာကြည့်တိုက်ထောက်ခံမှု install လုပ်ပါ။
ရည်မှန်းချက်: PERL-based applications များကိုင်တွယ်များအတွက်အခြေခံ command ကိုနှင့် function ကိုထောက်ခံမှု install လုပ်ပါ။
ရည်မှန်းချက်: PERL-based applications များကိုင်တွယ်များအတွက်အခြေခံစာကြည့်တိုက်ထောက်ခံမှု install လုပ်ပါ။
ရည်မှန်းချက်: Python-based applications များကိုင်တွယ်ရန်အခြေခံ command နှင့် function support ကို install လုပ်ပါ။
ရည်မှန်းချက်: Python3-based applications များကိုင်တွယ်ရန်အခြေခံ command နှင့် function support ကို install လုပ်ပါ။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် ဤ "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" မှန်ကန်သောများအတွက်လိုအပ်သောပံ့ပိုးမှုပေးရန်လိုအပ်သောအဘယ် pack များလိုအပ်သည် «instalación y gestión» အချို့ software ကိုဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု၏Distros အကြောင်း «DEBIAN y MX-Linux»တစ်ခုလုံးအတွက်, အလွန်အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်များအတွက်အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ applications များနှင့်ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့မှကြီးသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » DEBIAN 10 တွင် Software Development အတွက် Packages
ကျွန်ုပ်မှားလျှင်အမှားပြင်ပါ။ debian တွင်သူတို့သည် phpmyadmin ကို repositories မှဖယ်ထုတ်မပေးခဲ့ပါ။
php ကိုထည့်သွင်းရန် php7.3 (သို့) php7.3-curl ကိုသတ်မှတ်ရန်မလိုအပ်ပါ
Twikzer မင်္ဂလာပါ! မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် စင်စစ် phpmyadmin သည် DEBIAN 10 (တည်ငြိမ်သော) repositories တွင်မပါ ၀ င်သော်လည်းငါယူဆသော DEBIAN 11 (Testing) Repositories တွင်ရှိသည်၊ တစ်ချိန်တည်းတွင်၎င်းတို့သည်တည်ငြိမ်သောအခြားအစုများကဲ့သို့၎င်းကိုထည့်သွင်းလိမ့်မည်၊ ဒါကြောင့်ငါအဲ့ဒီမှာထားခဲ့တာပေါ့။ repository အတွင်းရှိလက်ရှိဗားရှင်းများကိုသူတို့၏ယေဘုယျအမည်ဖြင့်ခေါ်သောကြောင့်ဒုတိယနှင့်စပ်လျဉ်း။ မလိုအပ်ပါ။
Linux Lite 4.8 ကို Windows7နှင့်အစားထိုးနိုင်ပြီဖြစ်သည်